0 င် Odp အရည် Coating China Manufacturers & Suppliers & Factory
0 င် Odp အရည် Coating - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း0င် Odp အရည် Coating ထုတ်ကုန်များ)
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်0င် ODP အရည် Coating ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ဤ Nontoxic အန္တရာယ်ကင်း non-နာကျင်ကျိန်းစပ်လျက်ရှိ၏ နှစ်မြှုပ်ခြင်းအအေး0င်များ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေရှိသည် ODP တန်ဖိုးနှင့်အလွန်အမင်းနိမ့် GWP တန်ဖိုးကို Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ Perfluorinated...
min ။ အမိန့်: 1000 Box
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: လက်သန့်ရှင်းဆေး အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 500ml သောက်သုံးသောပုံစံ: ဂျယ် အဓိကတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပါဝင်မှု - 70-75% ethanol glycerin အသုံးပြုသူများ - လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - လက်အရေပြားသန့်ရှင်းရေး၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်သူနာပြုများအတွက်ဖြစ်သည် ရနံ့: Lavender စိတ်ကြိုက်: 1000...
Supply နိုင်ခြင်း: 300000 pcs per month
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: လက်သန့်ရှင်းဆေး အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - 60ml သောက်သုံးသောပုံစံ: ဂျယ် အဓိကတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပါဝင်မှု - 70-75% ethanol glycerin အသုံးပြုသူများ - လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - လက်အရေပြားသန့်ရှင်းရေး၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်သူနာပြုများအတွက်ဖြစ်သည် အမျိုးမျိုးသောအရသာ - ပန်းသီး၊ သံပုရာ၊...
Supply နိုင်ခြင်း: 300000KG/month
၇၅ ဒီဂရီအရက်ပိုးသတ်ဆေးသည်အခမဲ့လက်သန့်ရှင်းရေးဆေး၊ ရေရှည်ပantibိဇီဝဆေးများကိုဆေးကြောပါ။ ဆေးကြောပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုတွင်းတူးရန်မလိုပါ။ ကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးကိုလက်သန့်ရှင်းစေသောဆေးသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ကိုကာကွယ်ရန်လူကြီးများနှင့်ကလေးများက၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။...
မာကြောခြင်းနှင့်အက်ဆစ်ဆန့်ကျင်သောမိုးရေ Crystal ဖယောင်းခင်း
သားရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကိုယ်စားလှယ် ၁။ သားရေကွဲခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးပါ။ 2. အာဟာရပြည့်ဝစေပြီးသားရေကိုမပျက်စီးစေပါ။ ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ: ဤထုတ်ကုန်သည်ကားထိုင်ခုံများ၏မျက်နှာပြင်ကုသမှုကိုပညာရှင်ပီသစွာအသုံးချသည်။ ထိုင်ခုံသည်ကြာရှည်စွာအတုနှင့်နေထိတွေ့မှုတို့အတွက်မူလတောက်ပမှုပျောက်ကွယ်သွားသည်...
၁ ။ 120ML အတွင်းပိုင်းဆပ်ပြာ လက္ခဏာများ: ခေါင်းမာသည့်အစွန်းအထင်းများကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပါ။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောစပါးကျီ၊ 2. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ: ဤသည်ကားစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်မော်တော်ယာဉ်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သားရေအပေါ်ကောင်းသောသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,...
0 င် Odp အရည် Coating0င် ODP အရည် Coating0င် ODP အရည် ပစ္စည်း Coating 47 ဒီဂရီ Coating အရောင်မဲ့အရည် Coating ပွင့်လင်း AF Coating အရောင်မဲ့ Transparent အရည် Coating